DIB U EEGIS: Kahor Chapecoense ka bogo inta kooxood/xul ee shil dayuuradeed ku baaba’ay taariikhda! - Gool FM	twitter
DIB U EEGIS: Kahor Chapecoense ka bogo inta kooxood/xul ee shil dayuuradeed ku baaba’ay taariikhda!
(Gool FM) 30 Nof 2016 – Waxaa shalay ay dayuuradi la dhacday kooxda reer Brazil ee Chapecoense oo u safraysay dalka Colombia iyadoo u socotey magaalada Medelin ee dalkaasi Colombia oo ay final-ka Copa SudAmericana kula ciyaari lahayd kooxda Atletico Nacional.
Waxaana kooxdaasi oo ay haatan ka nool yihiin 5 laacib oo aysan 3 dayuuraddaba la soconin, sidoo kale la geeriyoodey shaqaalihii, tababarkii iyo 21 weriye.
Haddaba, waxaannu idiin haynaa dhamaanba inta kooxood ee ay taariikhda dayuuradi la dhacay.
DIB U EEGIS | Laacibiintii ay dayuuraduhu la dheceen
Maajo 4 1949
Dayuurad siddey horyaalladii Talyaaniga ee xilligaas ee Torino ayaa shil ku le’dey iyagoo kasoo noqonayay ciyaar ay Lisbon kulasoo yeesheen kooxda Benfica, waxaa shilkaa ku dhintay 31 qof oo ay ku jireen 18 laacib oo ka tirsanaa kooxda Torino oo berigaa la qaban la’aa, welise kama soo kaban jabkaas.
Febraayo 6, 1958
23 qof, oo ay ku jiraan 8 laacib oo ka tirsanaa Manchester United players iyo 3 shaqaale, ayaa ku dhintay, kaddib markii ay dayuuraddu dhacday iyadoo kasoo kacday meel ay shidaal ka qaadatay, waxayna kasoo noqotay ciyaar ka tirsanayd European Cup oo ay kaga horjeedey Red Star Belgrade.
Dadkii toodu gashay waxaa ka mid ahaa Duncan Edwards, oo markaa loo arkayay laacibka ugu wanaagsana England. Bobby Charlton iyo Matt Busby ayaa ka mid ah dadkii ka badbaaday.
Luulyo 16, 1960
Xulka Qaranka Denmark
Dayuurad u kiraysnayd Xiriirka Danish Football Association, ayaa ka kacday Copenhagen waxayse ku dhacday isla Øresund oo 50 mitir uun u jirta xeebaha Copenhagen, kaddib markii uu duuliyuhu xakamayn waayay dayuuradda.
Waxaa saarnaa 8 laacib oo u socdey Herning Airport si ay uga qayb galaan xulista laacibiintii Danish-ka ku meteli lahayd ciyaarihii Olombikada ee la qabtay 1960-kii.
Sebt 26, 1969
Kooxdii ugu Adkayd
Dayuurad siddey laacibiin badankoodu reer La Paz ah oo Bolivian ah ayaa ku dhacday degaanka fog ee Viloco (oo ku taalla dhulka sare ee Tres Cruces Peaks). Waxaa ku baxay gebi ahaanba 74 rakaab ahaa oo ay ku jireen macallin Eustaquio Ortuno, 16 laacib iyo shaqaalihii kooxda.
17 laacib iyo shaqaalihii kooxda FC Pakhtakor oo ah koox ka dhisan caasimadda Uzbekstan ee Tashkent ayaa ka mid ahaa 178 qof oo ku naf waayay isku dhac hawada ahaa.
Diseembar 8, 1987
Dayuurad Fookar oo ay lahaayeen Ciidamdda Badda Peru, F27-400M balse ay ijaarteen koox heerka 1-aad ah oo la yiraahdo Alianza Lima ayaa ku dhacday Badda Deggan ee Pacific Ocean iyadoo 6 mayl uun u jirta meeshii ay u socotey oo ah degmada Ventanilla oo ka tirsan Callao.
Waxaa saarraa 44 qof, waxaana ka mid ahaa 16 laacib, macallimiin, shaqaale, taageerayaal iyo shaqaalihii dayuuradda. Duuliyihii unbaa ka badbaaday.
Juun 7, 1989
Koox laacibiin ah oo Surinamese ah oo ka dheelayay Netherlands ayaa sameeyay koox loo bixiyay 11-kii Midabaysnaa (afka Dutch-ka Kleurrijk Elftal) waxaase shil la gashay Surinam Airways Flight 764, oo kasoo duushay Amsterdam, balse ku dhacday Paramaribo-Zanderij.
14 laacib oo kasoo jeeday Surinam iyo macallinkii, kuwaasoo ka dheeli jirey horyaalka heerka 1-aad ee Eredivisie iyo midka 2-aad ee Eerste Divisie ayaa ku dhintay, waxaana wehliyay 176 qof oo ka mid ahaa 187 rakaab ah iyo shaqaalihii dayuuradda.
Xulka Qaranka Zambian ayaa ka mid ahaa 30 qof oo ku dhintay shil dayuuradeed oo ka dhacay Badwaynta Atlaantigga, meel 500 mitir u jirta xeebaha Gabon. Wuxuu xulka Zambia u safrayay dalkaasi Senegal si uu ugula soo ciyaaro isreebreebka KA1994 lagu qabtay Maraykanka.